MK-IT – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
But we are proud to say that MK-IT contributed 3 entries already.
Entries by MK-IT
Har’a mandara Daawititti Fayyisaan isiniif dhalateera. Innis Kiristoos Goofticha dha.”
Dubbii fayyinaa Mana Kiristaana Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaatti
in Lallaba, Uncategorized
“Gooftaanis warroota fayyyuu qabaniif guyya guyyaan isaanirratti dabalaa ture.” (Hoj.D.B. 2፥47) Kaayyoon ijoo qophii barruu kanaa:- Waa’ee fayyina dhala namaa ilaalchisee warroota karaa ifa ta’een hubachuu hin dandeenyeef waa’ee fayyinaa waan isaan haasa’an Kitaaba Qulqulluudhaan ala kan ta’e ta’uu isaa agrsiisuuf barbaadamee ti. Warroota “Amantiidhaan qofa /amanuudhaan qofa/ fayyina.” jedhaniif barsiifatni isaanii dogongora akka ta’e […]
Asaffaa Guddataa Mootichi Salamoon weedduu isaa Faaruu Faaruu caalu jedhamee beekamu keessatti “Deebi’i deebi’i akka Si arginuuf deebi’i” jechuudhaan irra deddeebi’ee waama. Waamicha kana kan dabarsuus Giiftii keenyaafi dha. Iccitii gara boodaatti baroota dheeraan booda raawwatu ilaalee Afuura Qulqulluun argee “Godaansi si ga’aa. Amma yeroon isaa gaheeraatii gara biyya Kee Naazireetitti deebi’i” Isheen jedha. Haaluma […]